Darpan Nepal – पोखराको बाटुलेचौरमा तारामण्डल, विज्ञान केन्द्र र सिसा महल निर्माण
पोखराको बाटुलेचौरमा तारामण्डल, विज्ञान केन्द्र र सिसा महल निर्माण
Apr 07, 2018Pasang TamangSocial0Like
झलकमान गन्धर्भको जन्मस्थान पोखरालेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. १६ बाटुलेचौरमा नयाँ पर्यटकिय आकर्षण थपिएको छ । पर्यटकिय आकर्षणका रुपमा नेपालको एक मात्रै “पोखरा तारामण्डल, विज्ञान केन्द्र र सिसा महल” निर्माण गरिएको संस्थापक-संचालक मोहदत्त पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
विहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि खगोल विद्या सम्बन्धि ज्ञान बढाउने र रातको आकाशको दृश्यावलोकन गराउने उद्देश्यका साथ निजिस्तरबाट पोखरा तारामण्डलको स्थापना गरेको पोखरेलले बताए । यस्ता प्रकारका संरचनाहरु विश्वका प्रमुख शहरहरुमा राज्य स्तरबाट निर्माण गरिएका पाईएको भएपनि नेपालमा भने करिब ३ करोडको लागतमा आफुले निर्माण गरेको पोखरेलले बताए । युरोपियन स्तरको प्रविधिमा निर्माण गरिएको, प्रोजेक्सन मार्फत आफुलाई स्पेस मै गए जस्तो अनुभुति गराउने उक्त तारामण्डलले पोखरालाई स्मार्ट सिटिको रुपमा उजेल्याउनेमा आफु विश्वस्त रहेको पोखरेलले बताए । खगोलीय पिण्डका विषयमा समेत चासो राख्नेहरुका लागी पोखरा तारामण्डल सिकाईको केन्द्र बन्न सक्ने उनले बताए ।
पोखरेलले निर्माण गरेको मिनि विज्ञान केन्द्रमा विविध प्रकारका उपकरण, समान र औजारहरुको प्रयोगात्मक र प्रदर्शनात्मक सामाग्रीहरु राखिएका छन् । विज्ञानका विषयमा विषेस चासो राख्ने र नयाँ सिकाइका लागी उत्सुक विद्यार्थीहरुका लागी यो निकै प्रभावकारी हुने पोखरेलले बताए । यस्तै सिसैसिसाले बनेको सिसा महलमा प्रवेश गर्नासाथ व्यक्ति अचम्ममा पर्ने गरेको उनको भनाई छ । उनले भने “यसमा एक आकृतिका भिन्न प्रतिविम्बहरु हजारौको संख्यामा पाउन सकिन्छ । यसमा आफुलाई ताढा, नजिक र विपरित अवस्थामा विभिन्न कोणहरुबाट देख्न सकिन्छ । आफु हराउदा समेत थाहा नहुने गरि निमार्ण गरिएको यसलाई भारतमा भुलभुलैया भनिन्छ ।”
करिब १० रोपनीको क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको उक्त केन्द्रमा अत्यान्त सुन्दर बालमैत्री उद्यान समेत रहेको छ । त्यहाँ विभिन्न मोडलहरु (मोटु—पत्लु) चिंघम, जनावरका मोडेल, बालहिल, पिङ्, पंचमुखी हनुमान, डाईनोसर, वाटर फाउण्टेन लगायतका संरचनाहरु रहेका पोखरेलले बताए ।
साथै कन्चन जलले शोभित ३ देखी ७ फिट सम्मको गहिरो आकर्षक स्वीमिङ् पुलले बालाबालिका देखी युवायुवति सवैलाई शितलतासंगै थप मनोरञ्जन प्रदान गरेको उनले बताए । पोखरालाई स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुको आकर्षक गन्तव्य भनिरहदाँ उनिहरुको बसाई लम्ब्याउन यसले थप सघाउ पुर्याउने उनको विश्वास छ । नयाँ स्थानको अवलोकनका साथै मनोरञ्जन र सिकाईसंगै लैजाने आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको पोखरेलले बताए । उनका अनुसार पोखरा आउने पर्यटकका लागी उक्त केन्द्र भ्रमणको पुरकका रुपमा रहनेछ । विकासका लागी डृढ संकल्प आवाश्यक पर्नेमा उनको जोड छ ।
उक्त अवसरमा बोल्दै पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. १६ का वडा अध्यक्ष जिवनप्रसाद आचार्यले पोखरा तारामण्डल र विज्ञान केन्द्रलाई अध्धयनशिल पर्यटक र विद्यार्थीहरुको हवका रुपमा विकास गर्न सकिने बताए । उनले वडामा विकासको क्रम तिव्र रहेको जनाउदै पर्यटकिय दृष्टिकोणले वडा नं. १६ अनुपम रहेको बताए । साथै विकासको अभियानमा हातेमालो गर्न उनले वडावासिहरुलाई आह्वान समेत गरेका छन् ।
उक्त अवसरमा पत्रकार एंव संचारकर्मीहरुले वडा अध्यक्ष आचार्य सहित खगोलका बारेमा नयाँ ज्ञान हाषिल गरेका अपेक्षा गरिएको छ । उनिहरुलाई विज्ञान केन्द्र र तारामण्डलको प्रत्यक्ष अवलोकन गराईएको थियो ।
Previous Postघरको ढोकैमा यसरी छुरा रोपी श्रीमतीको हत्या गरेका रहेछ,मुटु दह्रो पारेर हेर्नुहोस (भिडियो सहित Next Postम्याग्दीमा चट्याङले ३ जना घाईते, २ बाख्राको मृत्यु